TAMBAJOTRA SERASERA : Tovovavy nanompa vadinà olom-boafidy, naiditra am-ponja
Manoloana ny fivoaran’ny teknolojia amin’izao fotoana, indrindra fa ny fampiasana ny tambajotra “facebook” dia maro ireo olona eto amintsika no lasa sahisahy manao ratsy. 8 mai 2018
Lasa mivaona tanteraka ny fomba fampiasana ilay tambajotra ka ao no lasa toerana iray hifampiantsiana ady, ankoatra ny fisolokiana sy ny maro hafa. Tranga tsy misy valaka amin’izay no niseho tao Sambava, herinandro lasa izay . Ramatoa iray vadinà olom-boafidy no niharan’ny tsy rariny tamin’ izany satria nanazava fa nisy nanompa tao anaty fanehoan-kevitra ny tenany.
Marihina anefa fa “ kaonty miafina sy tsy fantatra ny nanao izay zavatra izay raha ny fanampim-panazavana ihany. Avy hatrany dia nitondra ny raharaha teo anivon’ny mpitandro filaminana itsy farany mba hanao ny famotorana . Vao vatany nandray izay fitarainana izay anefa ireto mpanao famotorana dia efa nahatsinjo ny zava-misy fa kaonty tsy tena izy no nentina nampiasaina hanompana olona. Izany hoe entina hanaovana sotasota fotsiny ilay kaonty raha ny tena marina.
Tsy nananosarotra ireo Polisy ny nahitana ny nahavanona izany, vokany tovovavikely iray nipetraka tao Ambodisatrana Sambava no voasambotra. Taorian’ny fisamborana azy dia ny 03 mey 2018 lasa iny ny fanadihadiana azy tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha. Manoloana izay dia notanana vonjimaika any am-ponja aloha ity tovovavy ity mandrapahatonga ny fotoam- pitsarany.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2464) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021